Mai Chibwe VekwaZimuto: Kufigwa nomurume/mukadzi
Pakuroorana vaanhu vanoporomisana kuti vachadanana kusvika parufuasi pauviri hwavo hapana anenge achimbofunga kuti rufu guchatoitika. Hapana anogadzirira hana yake kuti achaita sei kana paitika rufu. MMaroorana kazhinji munofunga zvokuita vana. Hapana anofunga kuti upenyu hwevana huchaffamba sei kana umwe wenyu vabereki akafa.
Tikatarisa magarire evanhu mazuvano tinoona kuti pane zvakawanda zvinokwanisa kuuraya munhu pasina notice. Tinoona kuti vakawanda vanofamba nezvifambiso zvinokuvadza zvakaita se:
Tinoonazve kuti vanhu vanoenda kunyika dzakasiyanasyana kune zvigwere zvavasina kukura nazvo kureva kuti miviri yavo haina kugadzirira kubata zvigwere izvi. Kana vakazvibata vanokwanisa kufa nazvo.
Tinoonazve kuti kuhura kwawanda mumisha zvichireva kuti vanhu havachina matyira. Tinoonawo kutivakawanda vanohurirana mumba vachipanana zvigwere zvechihure vachiita nguva yakareba vasina kududzirana kana kuenda kundorapiwa. Zvigwere izvi zvinopiwa vana vanozvagwapo vokura vasina utano.
Tinoonazve kuti mukufamba kwevanhu kwawanda kudai vanosangana nnavamwe vafambi munzvimbo dzakasiyanasiyana uye pamwe vanomirira chifambiso vese vari munyika isiri yavo. Vanokwanisa kuvata pamabhazi vese varivo chete vanotaura chiShona. Vanokwanisa kuita nyaya kubva muHarare kusvika kuCape Town. Ipapo vanombovata mubhazi zvoitika kuti musikana anotsamhira murume wemunhu vakakotsira. Pakufamba pane nyaya dzokuti munhu asvika kwaari kuenda anoshaya kwekunovata. Vanhu vedu vechiShona havadi kufanofonera vanhu kuti vazive kuti hama dzichavhakasha. Munhu anosvika asina notice owana pamabhazi emuJobheki pasina akamirira. Uya apedza 12hours achitaura naye nyaya omuhwira tsitsi oenda naye kumba kwake, ipapo asiya mukadzi ane vane kuZimbabwe.
Mazuvano tinoona vafambi vakasiya varume/vakadzi kuzimbbabbwe vakaenda kunyika dzakawanda, UK, Germany, France, USA, PPortugal, India, Australia, Canada, RSA, Botswana, Namibia, Zambia, Malawi, Moza, etc. Ikoko vanosangana nevarume/vakadzi vamwe vari padambudziko iroro. Vanshamwaridzana nevamwe vanhu vsina kumboroorana noumwe munhu. Vanovhakashirana panguva dzisingaiti. Vanoita nyaya dzisinna kukodzera.
mazuvano tinoona vakawanda vachisvika kunyika dzavasina hama vasina mari yokubhadhara mhotera. Tinoona vachiitigwa nyasha navamwewo vekumusha asi zvichikwanisika kuti uya aita nyasha dzkupa munhu pokuvata kwevhikimbiri ange agara makore maviri asinawomukadzi wake.
tinoonazve vamwe vachishaya mari munyika isiri yavo kuzvika pakusanganisa shoma yavanayo kuti vakwanise kubhadhara rent vobva vagara pamwe chete asi uku uyu ane mukadzi kumusha uyuwo ane murume kumusha. Nhamo yavapinza padambudziko ravange vasina kuronga.
tinoonazve uya aitigwa nyasha achiona sokuti akabhadhara nomuviri wake anenge aita mukana wekuwedzera nyasha dziya dzaapiwa, iri ngari yokuti mari haana.
Pakufamba kwakawanda kwevanhu pane chihure, pane rufu, pane zvigwere, pane kusavimbika uye kusarangarira mhiko dzamakapanana pamuchato. Nyaya dzese idzi dzemazuvano dzange dzisiko kare, dzawedzera rufu.
Mazuvano tinoona mugwahwa yenyika dzakawandaa ichiwedzera zvifambiso asi pasina anogadzira migwagwa iyi.Tinoona njodzi dzemumigwagwadzichiwedzera. Tinoona mabhazi asina anoda kugadzira achingotakura vanhu. Tinoona madhiraivha asinei noupenyu hwevanhu. Inoverenga nezvekukuvara kwevakawanda.
Mazuvano tinoona vakuru venyika vachinorapiwa kune dzimwe nyika kureva kuti hosipitari dzemunyika dzavo hadzina kukodzera kurapa zvakanaka. Tinoona kuti vakawanda vari kufira muzvipatara nokuda kwekushaya mishonga. Tinohwa kuti vamwe vanopiwa magwaro ekuti vanorapiwa kuSouth Africa ipapo mhuri isina mari yokusvikako kana kutenga mishonga. Tinoona zvipatara zvangove nzwimbo dzokutandara kwema nesi. Tinoona varapi vanorega vanhu vachifa nokuti hapana hama yaita chiokomuhomwe.
Tinona vanhu vanorova nokuuraya vanhu nokuti vanosapot party yakasiyana. Tinoona vanhu vanorhepa hama dzmunhu anosapota party yakasiyana. Tinona vanhu vanosungwa nokuzoshaikwa nenyaya dzematongegwe enyika. Tinoona vanhu vanobaiwa majekiseni ezvigwere nokuti vasapota party isiriyo.
Pakuroorana mazuvano, ane njere anokasira kuhwisisa kuti kupanana mhiko dzokuti tichadanana kusvika parufu chinhu chinofanira kutauriranwa pauviri hwenyu nokutikufa kweumwe wenyu kunokwanisa kukasira kuuya. Rufu haguchashamisi pavanhu vedu. Kune zvakawanda zvinouraya zvange zvisiko kare.
Izvi zvinoreva kutimese murume nomukadzi hwisisai kut kana umwe wenyu kafa, akasiya umwe nevana panofanira kunge pane mukana wekurera vana ava. Musikana ane fungwa yokuwanikwa anofanira kuhwisisa kuti musi waachasiiwa ega murume afa kuchema hakumurereri vana. Anofanira kuva nezvaanoita kuti azokwanisa kurera vana vake. Musi waanosiya murume ahurigwa, anofanira kuziva uti vana vake achavarera sei.
Kudzidza kunodhura uye kunotora makore akawanda kupfuura makore okuita vana, asi kudzidza ndiko kunorera vana. Kuwanikwa usina kana mukana wekutambirawo kamari kako wega zvinoreva kuti hauhwisisi kuti mazuvano upenyu hwakamira sei. Kana usina kudziidza zvokusvika pakuwana basa, itawo chimwe chinhu chinokupa mari yokubatsirana kurera vana.
kozotiwo vamwe varume vanofunga uti kana mukadzi akatanga kutambira mari anobva azviona sokuti murume. Varume vakadai ukaona wadanana nnaye, kasira kumusiya utsvake umwe nokuti upenyu hwako nehwevana vako huchakunetsa zvese ari mupenyu uye afa. Musi waanodzingwa basa munoshaya chokudya mumbba nokuti hapana umwe munhu anotambira mari.
Vanhu ipananai mazano ekuwedzera mari inouya mumba, kwete kutukanirana kuti mukadzi anodirei kushanda kuita sokuti murume.
Kana waroorana nomunhu akachenjera, ziva kuti kugadzirira rufu chinhu chinorera vana vako.